Basil - Birch Dream Symbol & Nkọwa | Nkọwa Okwu - Nkọwa Okwu
Iwu Nke Mma
DREAM DICTIONARY Basil - Birch Dream Symbols & Meaning
Basil - Birch Dream Symbol & Nkọwa
B - Childrenmụaka
Peeji nke 3
Nnụnnụ - Ahụ
Peeji nke 4
( lee ahịhịa ndụ )
Hụnanya, ọkachasị ma ọ bụrụ na a hụrụ ka ọ nọ ọdụ na windo. Nke a bụ ụzọ ụmụ nwanyị Italiantali nabatara ndị na-achọ ịlụ ha.
Ihe nnọchianya dragọn ọzọ, nke jupụtara na ọkụ na ike, na-ewere aha ya site na akụkọ ifo 'basilisk.'
Ndi India: Nchoputa nke onyinye di nso na emume. A na-eji ahihia a eme ihe mgbe niile na ebe ịchụàjà nke Krishna na Vishnu.
( lee Bowl, Cauldron, Chalice, Gburugburu )
Ọdịdị nke nkata na-eme ka ọ bụrụ akara ngosi nke afọ, akụkụ nwanyị, na afọ ime.
Ọ bụrụ na nkata jupụtara, ihe ịrịba ama nke nrụpụta na inye. N'aka ozo, nkata efu na-ekwu maka ihe na ndu gi nke na-acho mmezu.
Olee kpọmkwem nkata ahụ? Ọ bụrụ na àkwá jupụtara ya, nke a nwere ike ime ka arụpụta ihe ọ pụtaara, ma ọ bụ dọọ ịdọ aka ná ntị ka ị ghara 'idebe àkwá gị niile n'ime otu nkata.'
Owuwe ihe ubi, ọmụmụ, ma ọ bụ ihe ijuanya na-atụghị anya ya. Ọtụtụ akụkọ ifo dị mkpa dị n'akụkụ ụmụaka na nkata na-ese n'elu mmiri jupụtara na rushes, gụnyere akụkọ banyere Moses, na Romulus na Remus.
( lee Anumanu, Nnụnụ, Na-efe efe )
Mụta ihe niile banyere Mmụọ, Totem & Ike anụmanụ .
N'ihi ọdịdị abụọ nke ihe nnọchianya ha, nrọ banyere ụsụ bụ otu n'ime ihe mgbaàmà kachasị ike mmadụ nwere ike ịnata n'oge oge nrọ.
Sụ na-egosi ikike ị gafe 'ọchịchịrị' nke ọdịdị ihe atụ, mana nke nwere ike ọ gaghị amata. Mụ amaala America kwenyere na ihe ndị ae kere eke na-eduzi n'ihi ikike igagharị agagharị ha. Hụ ebe ụsụ na-ebuga gị, lelee anya n'ụzọ nke ị na-aga.
Ọ bụrụ na ụsụ bụ gị, ma ọ bụ na ị nwere nku ụsụ, ọ ga-abụrịrị ụdị nrọ na-efe efe.
Na Babilonia na South Africa, a na-eche na usu na-ebu mkpụrụ obi. Yabụ, nke a nwere ike ịbụ ahụmịhe ahụ, ma ọ bụ ozi sitere n'aka onye nwụrụ.
Na China, Bats bụ akara nke ihu ọma na anụrị.
N'aka nke ọzọ, ihe nrọ banyere ụsụ pụtara nwere ike ịbụ ike na-adịghị mma. A na-ejikọ ha na akụkọ ifo nke vampires na ihe ndị ọzọ mmụọ ọjọọ. N'ihi ụsụ a na-anọchite anya ịbụ onye na-adịghị ọcha 'n'ime mmụọ (n'uche, nke mmụọ na nke mmụọ). Ọchịchọ ojii ojii na-ekwu maka ọdachi ndị na-abịanụ, yabụ na-adị uchu ịghọta ma ọ bụrụ na oge eruola ka ị mee mkpocha mmụọ nke onwe gị na gburugburu gị.
N'aka nke ọzọ, ịhụ ụsụ na nrọ gị nwere ike ịbụ akara nke ndị nọ na mpaghara gị ndị 'ike vampires'. Ndị a ga-a youụ gị nkụ nke akụ ọ bụla (ego, mmụọ na uche) ị nwere.
Kpuru ìsì dị ka a Bat Nrọ
Nke a bụ akara ngosi nkịtị na-agwa gị ka ị nọrọ na nche maka ọnọdụ ị nwere ike ịbanye na 'kpuru ìsì'. Were nke a oge iji gee ntị nke ọma ma nwee nghọta dị oke mkpa mgbe ị na-enyocha ma na-atụle ihe niile metụtara na ihe doro anya.
White Bat Nrọ
Ihe agba White bụ otu n'ime ihe nnọchianya kachasị ochie nke ịdị ọcha na ịrịgo. N'ihi ya, nrọ banyere bat batrị nwere ike ịpụta ọnwụ nke onye nọ n'ọgbakọ gị ka ọtụtụ ọdịnala na-ele ọnwụ na ịnwụ dịka otu n'ime emume nsacha kachasị elu.
Ọ bụghị nrọ niile gbasara ụsụ na-enweghị isi. Dabere na ebumnuche ndị ọzọ nke nrọ ahụ, ihe ndapụta ma ọ bụ nke ka elu gị nwere ike ibufee egwuregwu dị nro na-eme ka ị mara na gị ma ọ bụ onye nọ gị nso na-eme obere 'batty'.
Jiri nlezianya jiri akụ ma ọ bụ ume gị mee ka ihe fọdụzie oge dị mkpa ( lee Eletrik ).
Batrị ndị nwụrụ anwụ na-egosi na ị gabigala onwe gị ma ugbu a kwesịrị izu ike.
Isi iyi nke ike ma ọ bụ ike n'ime, nke ị nwere ike ịmaghị.
Mmeri, mmata na ihe ịga nke ọma. A na-eji okpueze Bay eme ihe na Gris ịsọpụrụ ndị eze, ndị ụkọchukwu, ndị na-ede uri, na ndị dike.
Unrehụnanya na-enweghị atụ. A gbanwere Daphne ka ọ bụrụ mmiri laurel n'ọnụ mmiri ka ọ ghara ịchụso Apollo.
Izere oké ifufe. N'oge ochie, a na-ewere ahịhịa a dị ka ezigbo amulet iji chebe ụlọ pụọ na mmebi site na égbè eluigwe na àmụmà.
( lee Aja, Seashell, Mmiri )
( lee Nri, Akwụkwọ nri )
Ọ bụrụ na a hụrụ ya na abụọ, nke a na-anọchite anya ike nwoke.
Lima agwa kpọmkwem na-egosi njedebe esemokwu.
N’etiti ndị Rom na ndị Gris oge ochie, a na-eji agwa eme ntuli aka. Be agwa ọcha bụ nzaghachi dị mma; agwa ojii adịghị mma. Kedu agba ndị agwa dị na nrọ gị?
Iri agwa nwere ike ịbụ ndụmọdụ na-atọ ọchị site na nghọta gị ịghara 'ịfụli onwe gị elu' ka okwu gị wee ghara ịpụta dị ka ikuku ọkụ!
N’ebe Ọwụwa Anyanwụ, soybean na-anọchite anya chi.
N’oge emepechabeghị emepe, eriiri lentil iji chịkwaa mmụọ. Ruo ókè ha aaa ka mmetụta gị guzoziri eguzozi n'oge na-adịbeghị anya?
Agwa dị iche iche n'ihi na ha na-ehi ụra ma na-eto eto na-aga n'ihu. Nwere ike chọta n’otu aka ahụ ụzọ gị itolite na mgbanwe si dị nnukwu iche na ndị gbara gị gburugburu.
( lee immụ anụmanụ )
Akụkụ grizzly ma ọ bụ aka ike nke ọnọdụ anyị (dịka, ime 'bearish').
Ọhia nke dị n'ime ya chọrọ nkwupụta karịa.
Herald: N'etiti ndị omenkà ochie, ihe okike a nyere ụgbọ ala zuru oke maka ntanetụ anya, ma na-eguzokarị maka-BEAR-ance.
Nne na-echebe ụmụ: Ihe omuma nke nne bu nke zuru oke; iwe ezi omume ma ọ bụ nchegbu na ezigbo ntọala.
Ezumike: Dreamdị nrọ nke ọnwụ ọzọ. Ọzọkwa, izu ike na ịchekwa ike maka oge siri ike dị n'ihu ( lee Ọgba ).
Enweghị atụ: Okwu ahụ bụ 'berserkers' n'etiti ezinụlọ ndị agha sitere na 'bear sarks,' uwe elu sitere na Artemis iji nye ndị na-agbachitere ala ya ike na nchebe.
Nwaafọ America: Ike karịrị nke mmadụ na ike.
Nke Akwụkwọ Nsọ: A kọwara bear ahụ, karịsịa, dị ka onye obi ọjọọ (nke e dere na Samuel, Hosea, na Ilu). Na oru ma obu nmekorita gini ka gi onwe gi, ma obu ka ikwesiri ibu, tinye udi ike a nke nchebe?
mbara ala nke kacha nso anyanwụ n’usoro
Inghụ ka ị na-ehi ụra n'ihe ndina nwere ike igosi na ike gwụrụ gị, ma ọ bụ na ị na-eleghara akara ngosi sitere na nsụzụ ( lee Nrọ ). N'aka nke ọzọ, esoterically nke a nwere ike ịbụ ụfọdụ ụdị Ahụmịhe Na-ahụ Maka Ahụ nke mmụọ na-efegharị n'elu ahụ ma nwee ike ịhụ ya nke ọma.
Ihe ndina n'onwe ya nwere ike ịnọchite anya agụụ ma ọ bụ mmekọahụ. N'ebe a, ọnọdụ nke ihe ndina na-egosipụta ọnọdụ nke mmekọrịta ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ akwa akwa a na-eme, nke a na-ezo aka na enweghị nsogbu nke 'ịmebe ihe ndina gị, ugbu a dinara n'ime ya.' Ihu ọma, ọnọdụ ọ bụla ị na-ahụ ugbu a ka emeworo site na omume nke aka gị ma ọ bụ enweghị ya.
Ihe dị n’okpuru akwa na-anọchi anya ihe zoro ezo, ihe nzuzo, ma ọ bụ ụjọ nke ị na-akpachapụ anya ezere.
( lee Mmanụ aeyụ, Inmụ ahụhụ )
Na-agba gị ụra: Ahụmahụ na-adịghị mma nke hapụrụ 'stinger' n'azụ, na-abụkarị nke mmetụta uche.
Na ekwo Ekwo: Community na socialization; ịmara ebe na ọrụ gị n'ime otu otu; nkwekọ otu ọrụ.
Na-efe site na ifuru ya rue ifuru: Gnakọta nectar ndụ, ịnụ ụtọ ụtọ ebe ọ bụla enwere ike ịchọta ya. N'aka nke ọzọ, ọdịdị na-agbanwe agbanwe.
Buzzing: Ozi; ndị mgbe ochie chere na a beụ na-ebufu ihe sitere n'aka chi n'onwe ha. A na-akpọ ndị ụkọ nwanyị nke Delphi 'Melissae,' nke pụtara a beụ, ha na-enyekarị achicha mmanụ a honeyụ dị ka onyinye maka ụgwọ ọrụ ha.
Akwụ Hornet: Nsogbu naanị na-eche ime. Emela ka ọnọdụ a ka njọ ma ọ bụrụ na ị ga-agba agba.
Na China, nrọ nke anụ ọhịa bụ ihe ndabara ọma.
Onye obia nke oma. Ma Pliny na Aristotle kwenyere na mkpụrụ obi ọma pụrụ ịlọ ụwa ọzọ dị ka a beeụ.
Mmụọ nke Muse. Na Gris, ndị kwenyere na ndị ọkà okwu kwenyere na ndị Birds of muses (bees), gụnyere Sophocles, Plato, na Virgil metụrụ egbugbere ọnụ.
Iberi elu n’enwụ anwụ nke ọdịdị ihe atụ ma ọ bụ nke nkịtị.
N’oge emume ochie, emume nsọpụrụ.
Na Koran, ihe nnọchianya nke ikwesị ntụkwasị obi, ọgụgụ isi, na amamihe.
Egwurugwu: Ihe ngosi nke uru na abia, karie ahia gi.
Ezenwaanyị aesụ na-anọchi anya chi nwanyị oge ochie, ma dị ka nke a nwere ike ịpụta nne gị, ebumpụta ụwa nne gị, ma ọ bụ ọdịdị nwanyị gị.
( lee Beverages, Ime biya )
N’Ijipt, ịingụ mmanya biya bali pụtara ịdị ogologo ndụ nye onye ahụ na-arọ nrọ, ebe biya biya e ji ọka wit mee na-egosi ọ timesụ dị n’ihu.
Andhụnanya na nkwa. Na Old Germany, a na-enye nwunye na ndị na-alụ nwanyị ọhụrụ onyinye nke Minne (love) iko nke jupụtara biya biya.
Ememme mmekọrịta. Na ọdịnala Norse kachasị, yana n'etiti ndị egwuregwu egwuregwu America, ihe ọ thisụ thisụ a na-enye echiche nke ihe ejiri ezi ụlọ ọrụ kerịta. Dị ka ndị dị otú a, ọ pụkwara ịpụta mmụọ nke ile ọbịa.
Echiche nke dabara na ịbụ otu n'ime 'ụmụ okorobịa.' N'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo niile, biya bụ ihe ọverageụ ofụ nke ndị nkịtị, ndị mmadụ kwa ụbọchị, bụ ndị na-anụkarị ụtọ na ibe ha.
( lee akwukwo nri )
Ọ bụrụ n ’nrọ rie beets, nke a na - ebu amụma banyere ozi ọma na - esote.
N'ihi agba ha, ha bụ ihe nnọchianya nke ọbara. N'ezie, ofe beet na-abụkarị akụkụ nke ememme Ngabiga maka nke a.
Ogologo ndụ nke jupụtara n'ịhụnanya. Aphrodite, chi nwanyị nke ịhụnanya, riri beets ka ọ wee maa mma. Ọzọkwa, na akụkọ ifo, ọ bụrụ na mmadụ abụọ nwere ike iri nri site na biiti, ha ga-enwe ịhụnanya ebighi ebi.
( lee Ogbenye )
( lee Church, Music )
Oge obi ụtọ; na-akụ ndị ochie ma na-anabata ndị ọhụrụ.
Nchedo na ịdọ aka ná ntị. Ejiri mgbịrịgba n'etiti ndị Hibru oge ochie na ndị Europe oge ochie na-atụ ụjọ mmụọ, mmụọ, na anwansi ọjọọ.
Oku na nkwanye uche: Na Tibet, a na-eji ọkwá ndị na-ada ụda dị ka mgbịrịgba maka ntụgharị uche na ekpere. N’oge ndi Kristian, mgbịrịgba mara ọkwa mbata nke Mmụọ Nsọ, na oge ofufe.
Na ọdịnala, ọ bụrụ na mgbịrịgba na-egbu oge, gee ntị na oge elekere. N'etiti abalị bụ nke kachasị njọ, na-eweta njedebe ma ọ bụ ọnwụ ( lee Anya, Ọnụọgụ ).
Akara: A na-eji ya n'ọtụtụ Eastern ands iji maa ọkwa, mkpokọta, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nke mbubata. Ọ bụrụ na ị na-enwe akụkọ, ọ ga-abịa n’oge na-adịghị anya. Ọzọkwa, oge ole ụda gong nwere ike ịdị mkpa ( lee Onu Ogugu ).
( lee Uwe )
( lee Nri, Mkpụrụ )
Blakberị na-anọchi anya owuwe ihe ubi. N’ebe a ka ị na-aghọrọ mkpụrụ ị kụrụ.
Red tomato gosipụta oge obi ụtọ ( lee ndi ozo site na agba ).
Strawberries na-egosikarị ihe gbasara ịhụnanya ma ọ bụ agụụ mmekọahụ. Ha dị nsọ nye chi nwanyị Scandinavia Freya, onye bụ nchedo alụmdi na nwunye na nwunye na-enye ndụmọdụ maara ihe nye Odin. N'aka nke ọzọ, ndị a nwere ike ịnọchite anya ike na-adịgide adịgide, ebe chi Norse riri strawberries iji hụ na ha dị mkpa.
Ezighi ezi n'akụkụ ụfọdụ nke ndụ gị. Tomato na-egosipụta mmesapụ aka nke ụwa site na ọnụọgụ ha na eziokwu ha na-eto eto ọhịa.
( lee kristal )
Ihe Ọ Beụverageụ Beverage
( hụ site na ụdị, Brewing, Chalice )
Nrọ ọnọdụ nke akpịrị ịkpọ nkụ n'abalị.
Metaphorical akpịrị ịkpọ nkụ maka ihe ma ọ bụ onye. N'okwu a, ihe ị rọrọ na nrọ ahụ nwere ike ikpughe nke ukwuu. Iji ma atụ, ị ,ụ ọgwụ ihunanya nwere ike igosipụta mkpa ọ dị imebi ịhụnanya onwe onye, ​​ma ọ bụ ọchịchọ ịchọta onye gị na ya ga-emekọrịta ihe na ndụ gị.
( lee Akwụkwọ )
( lee Akara )
Kedu ihe ịgba bọọdụ nwere na ya? Okwu na onyonyo ebe a na-abụkarị ozi sitere na mmụọ ọjọọ ma ọ bụ Onye Elu.
Jide n'aka na ị na-ewepụta oge iji chọpụta ma gụọ ihe ịrịba ama nke ndụ, ndị ọzọ, ma ọ bụ ọnọdụ na-enye gị.
( lee Ohia, Osisi )
Ọmụmụ na mbido. Osisi a na - enweta aha ya site na leta mbụ nke mkpụrụedemede Druidical, nke na - anọchitekwa mbido.
Ime akara dị iche na mpaghara nke gị na ọrụ, n'ụlọ, ma ọ bụ ọnọdụ. A na-eji mkpara ndị Birch eme ihe n'ememe oge ochie nke a na-akpọ Beating the Bounds nke ndị mmadụ ga-eje ije wee kaa ala ha akara ( lee Wand ).
Ntachi obi. Osisi a siri ike karịa akpu.
Okwu nke nkwukọrịta, ọkachasị ide ihe. A na-ejikarị osisi Birch eme ihe n'oge ochie dịka ụdị akwụkwọ.
Mmalite dị ọhụrụ nke na-eduga na ngosipụta na-amị mkpụrụ. N'ọtụtụ mpaghara ime obodo, ifuru osisi birch na-egosi mmalite oge ọkọ eto.
Dị ka Nwanyị Nwanyị, birch na-anọchitekwa amara na ịdị mma a nụchara anụcha.
mgbe Halley's comet na-abịa n'ihu
nwoke gemini nke nwere nwanyi scorpio n'anya
ọnọdụ neptune na sistemu nke igwe